2014-10-19 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
ဘာသာပြန်အပိုင်းအစများ (၃) ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် စက်ဘီးစီးသူကို ဖမ်းဆီး - အင်္ဂလိပ်သတင်း ဘာသာပြန်တင်ဆက်မှု
4:54 AM | No Comments |
=A Chiang Mai motorcyclist - ချင်းမိုင်းသား စက်ဘီးစမားတစ်ယောက်
= gainalot of attention for - အတွက်/သောကြောင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိလိုက်သည်။
You have gainedalot of attention for showing magic.
မျက်လှည့်ပြသောကြောင့် မင်းကို လူတွေတော်တော် အာရုံစိုက်ကြတယ်။
They gainedalot of attention for their ability.
သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့် သူတို့ဟာ (လူတွေရဲ့) တော်တော်လည်း အာရုံစိုက်မှုကို တော်တော်လည်း ခံရတယ်။
= lack of+ N - ဘာမှမရှိသော။
I'm lack of money.
They are lack of knowledge despite they got M.A degree.
သူတို့ မာစတာဘွဲ့ရခဲ့ကြသော်လည်း အသိအညာဏ်မဲ့ကြတယ်။
=Be filmed - ဗွီဒီယိုရိုက်သည်။
He was filmed when he went to Mrauk-U last year.
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် မြောက်ဦးသွားတုန်းက သူ့ကို ဗွီဒီယိုရိုက်ခဲ့တယ်။
I will film you when you become an actor.
မင်းသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသောအခါ ငါက မင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာလေ။
=through the streets of downtown Chiang Mai - ချင်းမိုင်မြို့ထဲ လမ်းတို့ကိုဖြတ်၍။ ချင်းမိုင်းမြို့ထဲလမ်းတို့တောက်လျှောက်။
= riding naked - ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် စက်ဘီးစီးလျှက်
= video clip - ဗွီဒီယိုအတိုအထွာ
=soon just - မကြာမီလေးမှာပဲ
The video clip was posted to Facebook. (၎င်း)ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဖေ့စ်ဘုခ်တွင် တင်လိုက်သည်။
= S+want t+ V1 - (သိ)ချင်သည်။ (စား)ချင်သည်။ (ကိုယ်တိုင်)
About everybody wanted to know who he was – including the police.
ရဲသားအသားအပါအဝင် လူတိုင်းနီးပါးက သူဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ခဲ့ကြတယ်။
They want to know how to go to Kyauk-phru.
ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာ သူတို့သိချင်ကြတယ်။
=Officers launched an investigation into the matter.
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ယင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစတင်းလိုက်ပါပြီ။
= view - ကြည့်ရှုသည်။
= after+V-ing/ N - ပြီးနောက်
= (the) N+who+v - သော-----သူ
People who had viewed the clip - ယင်းဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ဖူးသောလူများ
The man who is studying English အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေသောသူ
After school, ကျောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ
After studying English, အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပြီးနေက်
After receiving complaints from people who had viewed the clip,
၎င်းဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေဆီက စောဒကတက်ကြတာကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်
=Police traced the IP address of the person who first posted the clip.
ရဲသားတွေဟာ ပထမဆုံး၎င်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်သူရဲ့ IP address ကိုခြေရာခံလိုက်သည်။
=Mr Jetpol confessed that he was the rider in the clip.
မစ္စတာ ဂျက်ပိုလ် (Mr Jetpol) က ၎င်းဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှ စက်ဘီးစီးနေသူဟာ သူဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံလိုက်သည်။
= saying it was the result ofadrunken challenge
=became+Adj/ N - ဖြစ်လာသည်။ (ပျော်လာသည်။ ချမ်းသာလာသည်။ ဆရာဖြစ်လာသည်။)
My younger sister will becomeaclever teacher.
You will becomeateacher.
=challenge - လောင်းကြေးထပ် စိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
He was challenged by his friend.
သူဟာ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ စိတ်ခေါ်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။
= attended - တက်ရောက်ခဲ့သည်။
He and his friend had attendedaparty atarestaurant in the Kad Choeng Doi area.
သူနှင့်သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတို့ဟာ Kad Choeng Doi ဒေသတွင် ပါတီပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
= shot (shooting, shot, shot) - ဓာတ်ပုံ/ဗွီဒီယိုရိုက်သည်။ သေနတ်ဖြင့်ပစ်သည်။
= identified only as Bom - ဘွန် (Bom)ဆိုတဲ့အမည်လောက်ပဲ ထုတ်ဖော်ပြောကြားတဲ့
Aman in the group was the person who shot the video clip and posted it on Facebook.
သူတို့အုပ်စုထဲက လူတစ်ယောက်က အဲဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ပြီး ဖေ့စ်ဘုခ်ပေါ်မှာတင်လိုက်သည်။
= S+might+V - နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
= Crime - ပြစ်မှု။ ရာဇဝတ်မှု။
They said he might face charges of violating the Computer Crime Act for posting the clip.
၎င်းဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အွန်လိုင်းမှာတင်သောကြောင့် ဘွန်(Bom) ဟာ ကွန်ပျူတာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဟု ရဲတွေက ပြောကြားလိုက်တယ်။
=Police will summon Mr Bom for questioning.
ရဲကနေပြီး မစ္စတာဘွန် (Mr Bom) ကို စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ ဆင့်ခေါ်လိုက်သည်။
=fine - ဒဏ်ငွေရိုက်သည်။
= for committing - ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအတွက်
= release - လွှတ်လိုက်သည်။
Myanmar prisoners were released from Insein prison.
မြန်မာ့အကျဉ်းသားတွေကို အင်းစိန်ထောင်မှ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
The president U Thein Sein has released more than 1,000 political prisoners.
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Police fined Mr Jetpol 1,000 baht for committingalewd act in public and released him.
ရဲက မစ္စတာ ဂျက်ပေါလ် (Mr Jetpol)ကို အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင် (မြင်ကွင်းတွင်) မဖွယ်မရာပြုမှုအတွက် ဘတ်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီးနောက် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
naked - အဝတ်မပါသော။
arrested - ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
attention - စိတ်ဝင်စားခြင်း။
apparel - အဝတ်အစား။
lack - ဘာမှမရှိသော။
deputy - လက်ထောက်။
lanuch - စတင်လိုက်သည်။
investigation - စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။
matter - ကိစ္စ။ အရေးကြီးသည်။ အခြေအနေ။ အကြောင်းရင်း။
complaint - စောဒက။ စောဒကတက်သည်။
trace - ခြေရာခံ၍လိုက်ရှာသည်။
IP address ( Internet Protocol Address) - အင်တာနက် လိပ်စာ။
identified - ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
confess - ဝန်ခံသည်။ မှန်ကန်ကြောင်းထွက်ဆိုသည်။
drunken - အရက်မူးနေသော။
challenge - စိန်ခေါ်သည်။ လောင်းကြေးထပ်ပြီးစိတ်ခေါ်သည်။ စိန်ခေါ်မှု။
intoxication - မူးယစ်ခြင်း။
summon - ဆင့်ခေါ်သည်။
charge - ဒဏ်ရိုက်သည်။ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရသည်။ တရားစွဲသည်။ စွဲချက်တင်သည်။ အမိန့်ပေးသည်။
violate - ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သည်။ စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်သည်။
Act - ဥပဒေ။ အက်ဥပဒေ။
fine - ဒဏ်ငွေရိုက်သည်။
commit - ကျူးလွန်သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်။ ချိုးဖောက်သည်။
lewd - ညစ်ညမ်းသော။ ရိုင်းပျသော။
in public - လူမြင်ကွင်းတွင်။ အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင်။
release - လွှတ်လိုက်သည်။ ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
mention - မှတ်ချက်ပေးသည်။ ပြောကြားသည်။
baht - ထိုင်းနိုင်ငံသုံး ဘတ်ငွေ။
motorcyclist - စက်ဘီးစီးသမား။
motorcycle rider - စက်ဘီးစီးသူ။
___ အကောင်ချေ (ကျောက်ရိုး)
Ref: Bangkok Post Learning English
Translation News, ဘာသာပြန်သတင်း, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ
8:22 PM | No Comments |
saffron - ဂုန်မာန်
___Credit: The Express Times
အေကောင်ချေ ငါ့ကို အထူးထူးပြောမနိန်ကေ့
5:12 AM | No Comments |
ကျောက်ဖြူက ဇော်ဇော်တစ်ယောက် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်းပိုင်က စက်ရုံတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နိန်ရေ။ တစ်ရက်နိန့်ခါ ဇော်ဇော်တစ်ယောက် ပချီကာရီဝယ်စရာတိဟိမ့်လို့ ဟတ်ယိုင် (Hat Yai) မြို့ထဲက ဈီးတစ်ခုသို့လားပြီးကေ ဈီးဝယ်နိန်ခီရေ။ ယင်းဈီးဝယ်နိန်ရေအချိန်မှာ သူ့ဝမ်းကွဲအစ်မတစ်ယောက်က ဖုန်းလှမ်းဆက်တေ။
“ အဂု အလုပ်မှာလား။ အစော်မှာရောင်”
“အေကောင်ချေ ငါ့ကိုအထူးထူးပြောမနိန်ကေ့ တချက်”
“ယာ! ဟောက်တေလှက် မမ၊ ငါ ဖာချဈီးကိုရောက်နိန်ပါရေဒေ”
ငါ့အစ်မ အစော်ဖြစ်လို့ “အေကောင်ချေ ငါ့ကိုအထူးထူးပြောမနိန်ကေ့ တချက်” လို့ပြောရောင်ဂု ဆိုပြီးကေ ဇော်ဇော်တစ်ယောက် စဉ်းစားကြည့်မိရေ။
နောက်ခါမှ သူအဖြေကိုသိလိုက်တေ။ “ဖာချ” ဆိုစွာက ကိုယ့်ရို့ဒေသစကားမှာဆိုကေ ကောင်းရိုင်းရေစကားတစ်ခု။ ယေနဖြစ်လို့ ငါ့အစ်မ တမျိုးထင်လားစွာမလားဂု ဆိုပြီး
အမှန်က သူပြောရေ “ဖာချဈီး” ဆိုစွာ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဟတ်ယိုင်ဒေသတစ်ဝန်းမှာ အလုပ်လုပ်နိန်ကတ်တေ မြန်မာပြည်သားတိ ခေါ်ကတ်တေ ဈီးတစ်ဈီးတစ်ခု။
“ဖာချဈီး” ဆိုကေ ဟတ်ယိုင်တစ်ခွင်က မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားတိ မသိလူမဟိရေ ဈီးတစ်ဈီး။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဈီးသယ်မတိတောင်မှ မြန်မာစကား မပီကလာန ဈီးရောင်းနိန်ကတ်တေ နိန်ရာတစ်ခု။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဈီးတိလည်း အများကြီးဟိရေ နိန်ရာတစ်ခုမဟောက်ပါလား။ ယင်းဈီးနာမည်ကား “ဖာချဈီး”။
ဖြစ်နိုင်စော်က “Bazaar - ဘဇာ (ဈီး)” က “ဖဇာ” ယင်းနိန်လို့ “ဖာချ” ဆိုပြီး ဘာသာပြန်လာကတ်တေလို့ထင်မိပါရေ။
ဥပမာ။ ။ Facebook ကို “ဖေ့ဘုတ်”၊ “ဖီးဘုတ်”၊ Online ကို “အောက်လိုင်း”၊ “အောင်လိုင်း”၊ စသည်ဖြင့်။
(ဝန်ခံချက်။ ။ကျောက်ဖြူက “ကိုအီးယောင်” ကြုံဖူးရေ အတွိ့အကြုံကို ပြန်လို့မျှဝီပါရေ။)
ဘာသာပြန်အပိုင်းအစများ (၃) ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် စက်ဘီ...